Ukusasazeka kwiHlabathi liphela: ukuphucula iiplatifomu zokuSasaza ngokuCothisa okuPhantsi, uMgangatho oPhakamileyo, kunye ne-TCO esezantsi | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » Ukusasazeka kwiHlabathi liphela: ukuphucula iiplatifomu zokuSasaza ngokuCothisa okuPhantsi, uMgangatho oPhakamileyo, kunye ne-TCO esezantsi
Ukusasazeka kwiLizwe jikelele kuyilahle indlela yokuzisa isiseko sokulibaziseka esisezantsi kakhulu kwinqanaba leNdebe yeHlabathi besebenzisa iziseko ezisemgangathweni, ngelixa kuncitshiswa indleko eziqhelekileyo zamaqonga kunye nababoneleli beenkonzo. Itekhnoloji yokuSasaza i-Global patent kunye ne-patent-pending technology ijika nayiphi na iseva yokugcina ilifu ibe yindawo yokuhamba-ngokukhawuleza ekhawulezayo, ngaphandle kokufaka nayiphi na isoftware eyongezelelweyo kwiserver. Oku kwenza ukuba bukhoma, umgca, i-OTT, intlalontle, kunye ne-VOD isasaze nge scalability yehlabathi jikelele kubanikezeli bamafu abakhoyo, njengeMicrosoft Azure, Amazon AWS, kunye namafu abucala / abucala. Ngendlela ekhethekileyo yokuhamba ngokuthe ngqo ngokusebenzisa iiseva zokugcina amafu, ukuSasaza iGlobal kususa ezona ndawo zisebenziseka kakhulu zombhobho wokusasazeka, ukwanda kwesantya kunye nokunciphisa iindleko.
Sebenzisa itekhnoloji ye-Global Global kwiqonga lakho ukufezekisa:
I-latency ephantsi yokugqibela / ukulibaziseka-Izantya ukuya kuthi ga kwi-60x ngokukhawuleza kunombhobho oqhelekileyo wokuhambisa kunye ukuya kuthi ga kwi-20x ngokukhawuleza kunentambo kunye Sathelethi ababoneleli, ukusondeza ababukeli kufutshane kunangaphambili kwisenzo esiphilayo abasithandayo.
Isikali esithembekileyo -Ukujonga isikali sehlabathi jikelele ukuya kumashumi ezigidi zababukeli naphi na emhlabeni ngoyilo.
Ukusasazeka kunye nokudityaniswa kwedatha-lixesha elitsha lemicimbi ephilayo! Nge-Global Global yokusasazeka, ungangqamanisa bonke ababukeli kunye nesixhobo ngasinye kwifreyimi efanayo, ukubonelela abasebenzisi bakho ngamava obumbeneyo. Umzekelo, khawucinge nje ngezibonelelo zokubheja kwezemidlalo: ukunyusa ubulungisa kunye nokukwazi ukuthatha i-bets ngaphezulu kumdlalo.
Ukufakwa ngokukhawuleza kwentengiso / ukucoca-Nge-Global Global ungafaka iintengiso kuyo nayiphi na isakhelo, ngaphandle kokungasebenzi okanye ukuphazamisa umsinga ophambili, ngelixa wenza ukubonwa okunjengokusasaza. Izibhengezo zinokude zibhengeze iintengiso ezenzelwe wonke umntu kubaphulaphuli.
Itekhnoloji ye-Global Global yokusasaza ilungele ukusasaza iijane ezingama-24/7 ze-OTT kunye nemicimbi ephilayo enomxholo omnye kunye nokuhamba okuninzi. Sisisombululo sanamhlanje, esenziwe lula kumaqonga kunye nababoneleli beenkonzo abafuna ukubonelela ngamava afanelekileyo kubabhalisi babo.
Umxholo wakho unokuhanjiswa ngokulibaziseka kwesibini ukuya kumashumi ezigidi zababukeli kwinxalenye yeendleko ozihlawulayo ngoku.
Njengoko iimfazwe zokusasaza zishushu, ababukeli bafuna ukukhula ngokukhawuleza kunangaphambili kunye nedabi lamaqonga kunye nabanikezeli beenkonzo abanikezela ngamava awona aphezulu liphezulu lonke ixesha. Imidiya iyaqhubeka nokuguqukela ekuhanjisweni kwe-IP, kwaye iinkampani zijonge ukuzisa eyona nto inokwenzeka yokujonga ukufezekisa iimfuno. Ngelishwa, iindlela zokuhambisa zokuhambisa zokuhambisa azikwazi ukufezekisa le mfuno kwaye ziqhubeke nokuzabalaza ngokusombulula iindawo eziphambili zentlungu yokusebenza, ubungakanani kunye neendleko zokuhambisa ..
Ukusasazwa okwenziwa komsebenzi okuphezulu (okulungelelaniswe kunye nokulibaziseka okuncinci) akukwenzeka kwi-Intanethi yoluntu ngokubanzi, kude kube namhlanje.
Ngolwazi oluthe kratya ngokuSasazeka kwiHlabathi Jikelele, nceda undwendwele ISStressingGlobal.com
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli I-Litra Matthews OTT Imikhonto kunye neentolo yoGcino Injini yeVidiyo 2020-05-15
Previous: Ingcali yeMveliso-Inqanaba lokungena
next: Inkqubo yeKhamera ye-B & H eNtsha yeNkqubo eKhawulezayo yokuThatha imifanekiso engaphandle